Nhau - Mhemberero Yakakodzera yeKisimusi Nevashandi Vedu NeVatengi
Mhemberero Yakakodzera yeKisimusi Nevashandi Vedu NeVatengi
Mhemberero yeMutambo weKisimusi wa2020 yaive nguva yakanaka uye yakasarudzika yakazadzwa nekunakidzwa kukuru uye simba kune vese vashandi vekambani yedu.
Kisimusi Fiesta, iyo inopembererwa pasi rose, kazhinji inguva yekuratidza chiito cherupo, rudo uye mutsa kune vatinoda, shamwari, vatinoshanda navo, nevavakidzani, uye zvakare nguva yakatarwa yekuungana kwemhuri. .
Kana tiri isu kuSuzhou Springchem International Co., Ltd., kufara nekupembererwa kweKisimusi kwakaratidzwa nevashandi vedu vese uye vatengi zvakafanana.
Uye semumwe wevagadziri vemazuva ese emakemikari fungicides uye mamwe makemikari akanaka;zvese nekuda kwevashandi vedu vasingarege uye vanoshanda nesimba, kambani yakapa chiito cherupo kune vashandi vayo nemapasuru akati wandei uye mibairo.
Kuti tive nechokwadi chekuti vashandi vedu vapemberera uye kunakidzwa nemutambo weKisimusi nevadikani vavo mumhando huru, kambani yakaparadzira nekufunga zvinhu zvezvipo zvakarongedzerwa mushandi wega wega mukambani.
Pamusoro pezvipo zvakapetwa zvakapihwa mushandi wese mukambani yedu, takarongawo kupera kwegore tichifara apo takapa mibairo uye zvinokurudzira kumapoka akasiyana evashandi mukambani, zvichienderana nehuwandu hwebasa ravo.
Sezvakangoita tsika yedu semugadziri anoremekedzwa wechloroxylenoluye mamwe makemikari akanaka, mabasa ehutano hwekambani kune vashandi vose mukambani yaiva nzira yekuendesa kufara uye kufara kwekambani maererano nekuzvipira uye kushanda nesimba kwevashandi kwemakore.
Pamusoro pezvo, ichi chiito chemutsa, kugovana, uye rudo, nekambani chakaitwa mukukurudzira vashandi vese vekambani kuti vawedzere kushingaira kwavo uye nekubudirira mune imwe kuchengetedza chimiro chekambani semumwe wevanonyanya kugadzira makemikari efungicides.
Mabatiro emushandi pamusoro perupo uye mutsa wevakuru vekambani waive kuratidza kuzere kufara pakuratidzira uye mufananidzo werudo watakavaratidza, izvo zvakavafarira vese.
Pamusoro pezvo, vakuru vemadhipatimendi ese ari musangano vakavimbisa kupa zvakanakisisa pamwe chete nechikwata chavo mukusimudzira mwero wekambani inova imwe yevanotungamira makemikari efungicides uye vagadziri vemakemikari akanaka.
Saizvozvo, vashandi vakavimbisawo kambani kuti vacharamba vachiita basa ravo nesimba kuona kuti kambani iyi ine mukurumbira pasi rose semumwe wevagadziri vemakemikari efungicides uye makemikari akanaka anochengetedzwa kuburikidza nekuzvipira kwavo kumabasa avo.
Mhemberero yeKisimusi mukambani yedu yakabudirira sezvo munhu wese akafara pavakadzokera kumusha nezvipo zvakawanda zverubatsiro zvekupemberera Kisimusi.
Batana nesu kune akanakisa kemikari fungicides
Semumwe wevanotungamira vagadziri vemakemikari fungicides uye mamwe makemikari akanaka sengechloroxylenol, unogona kuva nechivimbo matiri kune zvese zvaunoda zvemakemikari.
UnogonaTaura nesunhasi kune yedu yemhando yepamusoro yemakemikari fungicides, uye iwe uchafara zvakanyanya kuti waisa mari muzvigadzirwa zvakanakisa.
Nguva yekutumira: Jun-10-2021